OMN:Oduu sadaasa 27,2015 Pirezidantin Turkii akkas jechuun | Fighting for Freedom and Equality
OMN:Oduu sadaasa 27,2015 Pirezidantin Turkii akkas jechuun
Posted by Gishe Abdi Wako on November 28, 2015
akeekkachiisa Raashiyaaf haa kannani iyyuu malee, michummaan Dipiloomaasiibiyyoota lamaanii akka laafu biyyi isaanii hinbarbaaddu jedhan.
Pirezdantiin Turkii Recep Taayip Erdoogaan wal dhibdee biyya isaanii fi Raashiyaa gidduu jiru ilaalchisuun dubbi dubbataniin Raashiyaan ibida waliin taphachuu dhaabuu qabdi erga jedhanii booda quunnamtiin biyyoota lamaaan gidduu jiru akka laafuu garuu hin barbaadu jedhaniiru.
Turkiin torbe darbe xiyyaara waraana Raashiyaa daangaa irratti rukkuttee kufisuu ishee hordofuun lolli jechootaa biyyoota lamaan giddutti gaggeeffamaa jiru itti fufuun jabaachaa deemaa jira.
Pirezdantiin Turkii Recep Taayip Erdogaan dubbi Televiishinii biyyyatti kallattiin tamsa’a ture irratti dubbataniin yaa’ii dhimma jijjiirarma qilleensaa addunyaa Faransaayiitti taa’amuuf deemu irratti Viilad Miir Putiin waliin qaamaan wal arganii akka mari’achuu barbaadan dubbtaniiru.
Vilaad Miir Puutiin gama isaaniin Turkiin seera addunyaa cabsuun daangaa Sooriyaa keessatti xiyyaara waraanaa Raashiyaa rukkuttee kuffisuu ishee balaaleffachuun biyyattiin bobb’aa ISIS irra bituun Shororkessitootaa deggerti jechuun himataniiru.
Erdoogaan ibsa kanaan dura kennaniin Turkiin kaayyeffattee akka xiyyaara sana hin rukkunne haaluun loltonni biyyatti yemmuu tarkaanfii sana fudhatan xiyyaarri sun kan biyya kamii akka ta’e adda baasanii hin turre jedhaniiru.
Xiyyaarrii waraanaa Raashiyaa loltootaa daangaa Turkiin rukkutamee kufuun isaa tarkaanfii Sooriyaa keessatti garee ISIS irratti Raashiyaa fi Ameerikaan fudhachaa jiran bu’aa argamsiisaa jedhamaa ture dukkanneessu akka hin oole dubbatamaa jira.
Haleellaa xiyyarra Rasshiyaa irratti raawwate kana ilaachisuun biyyoonni lamaan yaada garagaraa kennaa jiru.
Turkiin xiyyaarri sun akeekachisa irra deddebiin itti kennamaa ture cabsuun daangaa biyya keenyaa seenuuf yemmuu jedhu rukkunne yemmuu jettu Rashiyaan immoo gama isheetiin gochi sun itti yaadamee kan raawwatee dha jechuun akka himachaa jirtu BBC n gabaase jira.
← Magaalaan INCINNII FDG Ummataa fi Qeerroo dargaggoota Barattoota oromoon dhuunfatamte.
Mootummaan Wayyaanee FDG Adeemsifamaa Jiru Dhaabuuf Jecha Manneen Barnootaa Cufuu Eegale!‏ →